Wasiir beeraha qaabilsan oo Howlgal Milatari sheegay kuna dhaartay Cudada Ciidamada AMISOM. | Halganka Online
Wasiir beeraha qaabilsan oo Howlgal Milatari sheegay kuna dhaartay Cudada Ciidamada AMISOM.
Posted on Febraayo 4, 2010 by halganka
Max’ed Ibraahim Xaabsade oo maamulka DKMG ah u qaabilsan Beeraha ayaa shaaca ka qaaday isagoo dhaaranaya weerar in ay ku yihiin maalmaha inasoo aadan Wilaayaatka Islaamiga ah ee dalka Somaliya halkaasi oo laga hirgaliyay Shareecada Islaamka, shacabkuna nabad galyo kula naaloonayo.
Xaabsade oo hadal siinayay Idaacad Maxalli ah ayaa sheegay in dhameeyeen dhamaan qorshayaalkoodii ku aadanaa diyaar garowga dagaalka ayna dhawaan duulaan kusoo yihiin meelaha kala duwan ee laga heysto.
Waxaa uu sheegay in Ciidamada dawladda KMG ah dagaallo isku waqti ah ka gali doonaan gobollada dalka sida Hiiraan, Banaadir, Shabeellooyinka, Jubbooyinka iyo Gedo waana gobollada ay hadda gacanta ku hayaan intooda badan Shabaabul Mujaahidiin.
Hadalka Xaabsade wuxu daba soconaya hadallo hore ay warbaahinta uga sii daayeen xubno kala duwan iyo madax kamid ah DKMG ah kuwaasi oo sheegayay dagaal kama danbeys ah in ay qaadayaan si dib ay ugu soo ceshadaan inta ay awoodaan dhulka hadda Islaamiyiintu maamulaan.
« General Galaal oo shalay Muqdisho soo gaaray, kagana sii gudbay gobollada dhexe oo hadda uu kaga sugan yahay degmada Guriceel. Halkaan ka daawo Sheekh Xasan C/laahi Xirsi Sheekh Xasan Turki ayaa maanta markii ugu horeysay faah faahin ka bixiyay qaabkii uu ugu biiray xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab »